Ciidamada Amaanka Soomaaliya oo heegsan sare la geliyey (Maxaa soo kordhay?) – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Wasiirka Wasaarada Amniga Qaranka Xukuumadda Soomaaliya, Khaliif Axmed Ereg oo xalay Warbaahinta Shir Jaraa’id ugu qabtay Magaalada Muqdisho ayaa digniin ka soo saaray weerarro Al-Shabaab damacsan yihiin in ay ka fuliyaan Qeybo ka mid ah dalka.
Khaliif Axmed Ereg ayaa tilmaamay in la dilay hogaamiyihii ururkaas, Axmed Cabdi Godane, taasina keenin karto in Alshabaab geystaan weeraro aargoosi ah.
Wasiirka Amniga Qaranka ayaa sheegay in Hay ‘adaha Sirdoonka Soomaaliya ay heleen xog la xiriirta in Al-Shabaab ay doonayaan in ay weerarro ka geystaan, xarunaha Caafmaadka, Waxbarashada iyo meelo kale oo Muhim ah.
“War sir ah oo la helay kowdii bishaan ayaa lagu dilay hogaamiyihii Alshabaab, Axmed Godane, taasi ayaa keeni karta iney kooxo naf la caari ah ay weeraro ka geystaan Iskuulada, goobaha caafimaadka iyo meelo kale” ayuu yiri wasiir Khaliif Axmed Ereg.
Waxa uu xusay in Dowlada Soomaaliya ay u diyaar garoowday in ay ka hortagto Weeraradaasi waxa u sheegay in ay heegan gelinayaan dhammaan ciidammada Qalabka Sida.
Khaliif Axmed Ereg Wasiirka Amniga Qaranka aya ugu baaqay Shacabka Soomaaliyeed in ay gacan ka geystaan sidii Dowlada ay ugu hortageyso Weeraradaasi, ayna soo shgeegaan shaqsiyaadka doonaya iney fuliyaan weeraradaas.
“Waxaan heegan gelinay dhamaan ciidamada qalabka sida, si looga hortago weeraro suuragal ah, waxaana shacabka Soomaaliyeed ugu baaqeynaa iney soo sheegaan wixii ay arkaan” ayuu sidoo kale yiri Ereg.
Waxa uu sheegy in ay geerida Godane ay Al-Shabaab ku noqon doonto dhabar jab weyn. War qoraal ah oo kasoo baxay Wasaaradda ayaa lagu sheegay in saraakiil ka tirsan sirdoonka Maraykanku ay xaqiijiyeen dhimashada Axmed Cabdi Godane oo lixdii sano ee lasoo dhaafay ahaa hoggaamiyaha sare ee Ururka al-Shabaab oo isagu qayb ka ah Ururka al-Qaacida.
Guddiga maamul u sameynta gobolada dhexe oo lala dardaarmay